I-Tasman Sea: izici, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngohlobo lolwandle olwehlukile ngezindlela eziningi. Imayelana ne- ulwandle lwe-tasman. Itholakala eningizimu yezwe futhi inesimo sezulu esihlukile, kanye nezimbali nezilwane ezahlukahlukene kakhulu. Le ndawo ingakhonjwa ngokusobala njengendawo eseningizimu kakhulu yalo lonke ichibi lasePacific. Itholakala oGwini lwase-Australia naseNew Zealand olugezwa uLwandle iTasman.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, ukwakheka, izitshalo nezilwane zoLwandle iTasman.
2 Isimo sezulu saseTasman Sea
3 Ulwandle iTasman kanye nezakhamizi
Ukuma kwalolu lwandle kuhlukile, ngoba yonke le ndawo iwela izindawo eziningana zezulu. Omunye umbuzo othakazelisayo yimingcele yawo. Kuyindawo eseningizimu kakhulu yolwandle lwasePacific Ocean. Uma sibheka ebalazweni, singabona lolu lwandle njengedayimane elihle elihlanganisa amazwekazi. Kulolu lwandle kunemifula eminingi yamakhorali, iziqhingi nokuphakama okuphawulekayo kwaphansi. INorfolk Island iyindawo esenyakatho yomngcele ophakathi kwezilwandle.
ITasman Sea iyaheha ngosayizi njengoba inendawo ecishe ibe amakhilomitha-skwele ayizigidi ezingama-3.5. Ukujula kwayo nakho. Ingxenye ejulile yalolu lwandle yaziwa njengendawo yaseTasmania futhi inokujula kwamamitha ayi-6.000. Isiqhingi saseTasmania sidume kakhulu kulolu lwandle. Itholakala esiqhingini eseningizimu ye-Australia cishe ngamakhilomitha angama-240.
Yonke le ndawo iyasebenza ngokuma komhlaba. Ososayensi abaningi bebelokhu behlola zonke izinqubo zokwakheka komhlaba ezenzeka kulezi zindawo. Okugqame kakhulu ngoLwandle iTasman ukunotha kwezinto eziphilayo, kokubili ezimileni nasezilwanyaneni. Izilwane eziyingqayizivele zitholakala lapha, ezaziwa kakhulu kunazo zonke yi-Tasmanian devil. Futhi ongakusho ukuthi inezinqwaba zamakhorali. Kunendawo eyaziwa ngokuthi isiqhingi samakhorali futhi iyidwala elikhulu lelo kuthatha cishe amamitha ayi-600 ngaphezu kogu lolwandle futhi kungamamitha angama-200 ububanzi.
Abantu bomdabu abahlukile batholakala esiqhingini saseTasmania esihlala abantu abambalwa kakhulu. Isibonelo, i-Lord Howe Island inabantu abangu-400 kuphela. Kuyisiqhingi esidala kunalo lonke lolu lwandle. Eduzane nogu lolwandle sithola imiphetho ebushelelezi kuyo yonke insimu. Kwamanye amanzi asogwini atholakala ezindaweni ezinesihlabathi nasekujuleni kwamatshe, ubumba kanye nenhlanganisela yakho kokubili.
Isimo sezulu saseTasman Sea
ITasman Sea yatholwa ngu-Abel Tasman ngo-1640. Ngakho igama layo. Kwakungekho lwazi oluningi ngaleli kolwandle eminyakeni edlule. Abantu babengazi nokuthi bakuphi e-Australia.
Mayelana nesimo sezulu, sinokuhlukahluka esifundeni sonke. Eceleni koLwandle iTasman kunesimo sezulu esishisayo, esishisayo nesifudumele. Lezi zinhlobonhlobo zezulu zenza ukuthi kuthuthukiswe inani elikhulu lezimbali nezilwane, okwenza kube yindawo yokuhlala eyingqayizivele. Izimo zezulu zithinta imisinga yolwandle engatholakala lapha. Umoya oshisayo ojikeleza kulezi zifunda wenza amanzi afinyelele kuma-degree angama-26. Engxenyeni eseningizimu kunamanzi abandayo ngenxa yokusondela kwe-Antarctica. Eminye imifudlana inezinqamu ezinkulu zeqhwa njengoba amazinga okushisa ehla ngaphansi kuka-zero ngezikhathi ezithile zonyaka.
Kwenzeka okufanayo nangamagagasi. Kukhona ukunyakaza kwamaza okungafinyelela kumamitha ama-5. Kuhlukile futhi maqondana nokubusa kwesiphepho. Umoya oqhamuka oLwandlekazi iPacific yiwona obhekele ukuba khona kwalezi ziphepho. Ukukhuphuka kwamazinga okushisa olwandle kwenza inani elikhulu lomoya ofudumele lishayisane nomoya obandayo phezulu. Lapho umoya oshisayo ukhuphuka uhlangane nomoya obandayo ukuphakama, zigcina sezincipha futhi ziveze amafu emvula. Ngokuqhathaniswa kwamazinga okushisa izivunguvungu ezinamandla kakhulu zingadala lokho kudale izinhlekelele ezithile zezulu.
Kufanele kuqashelwe ikakhulukazi lokho phakathi kwama-40-50 degrees latitude kulapho kunamathuba amakhulu eziphepho.
Ulwandle iTasman kanye nezakhamizi
Sishilo ukuthi indawo inezindawo eziningana zezulu. Lokhu kudala umthelela kubahlali bakulezi zindawo. Endaweni esenyakatho kukhona ukufudumala okwanele ukuba nesimo sezulu esishisayo. Kungabonakala ikakhulukazi ngenxa yobuningi bezilwane. Kwezinye zezinhlobo esizitholayo, sibona oshaka, izinhlanzi ezindizayo kanye nezilwane eziningi ezincelisayo ezifana nemikhomo.
Inani elikhulu lezinhlobo zikashaka zihlala eningizimu yeTasman Sea. Umhlophe omkhulu udume kakhulu. Izivakashi eziningi ziyesaba amaphiko alo amakhulu. Kunemikhankaso eqhubekayo enamakheji nezinsimbi zokuntywila ukubona oshaka abamhlophe. Lokhu kuheha izivakashi kubalulekile emholweni waseTasman Sea. Ngakolunye uhlangothi, izinhlanzi ezindizayo zihlaba umxhwele ngosayizi, kwesinye isikhathi zifinyelela uhhafu wemitha ubude. Imvamisa ihlala emanzini afudumele futhi inamaphiko amane. Bangakwazi ukuphuma emanzini ibanga elide impela. Ubude bendiza engaphezulu kolwandle buya ngejubane lemisinga yamanzi.
Uma ufuna ukubona ama-cetaceans oLwandle iTasman kufanele uye engxenyeni esenyakatho. Singathola imikhomo yesidoda, isigxobo nemikhomo yokugcina. Lawa ma-cetacean ahlala kulezi zindawo ngenxa yokwakheka komhlaba kwe-zooplankton emanzini. Ukubona iCetacean kungenye yezinto ezithandwa kakhulu izivakashi.
Ekugcineni, sizokhuluma ngezinye zezinhlobo zezitshalo nezilwane. Ulwelwe lukhula kakhulu endaweni esenyakatho lapho isimo sezulu sifudumele futhi silinganisela ngokwengeziwe. Imisinga epholile ayithinti ubuningi bezinhlanzi. Imvamisa izinhlobo ezinjenge-tuna, i-mackerel, i-Jorge, yedwa, phakathi kokunye.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeTasman Sea nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ulwandle iTasman